news नेपालविदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ ? यी हुन् भन्सार नतिरी ल्याउन पाइने मोबाइल र समानको लिस्ट - news नेपाल
२०७८ मंसिर १५, बुधबार १५:२८
विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ ? यी हुन् भन्सार नतिरी ल्याउन पाइने समान
काठमाडौं । विदेशबाट फर्कने नेपालीहरुमा कानुनी व्यवस्थाको पर्याप्त जानकारी नभएका कारण अपरिचित व्यक्तिले ललाई फकाई विभिन्न सामाग्रीहरु नेपाल पठाउने गरेको पाइएको छ । मंगलबार मात्रै त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशबाट आएका मानिसहरुबाट अवैधरुपमा भित्रिएको करोडौं मूल्य बराबरको सुनका वालाहरु बरामद भएको छ । धेरै जसो विदेशबाट फर्किएका कारमदारहरुलाई सामान्य पैसा दिएर अवैधरुपमा सुन भित्र्याउने गरिएको पाइएको छ । जसमा सोझसाझा कामदारहरु फस्ने गरेको छन् ।